आइतबार जुलाई 18, 2021 |
आइतबार जुलाई 18, 2021
विषय — जीवन
उत्तरदायी पढाइ: उत्पत्ति5: 1, 2, 21-24
1 आदमको परिवारको विषयमा लेखिएको इतिहास यही हो। परमेश्वरले मानिसको सृष्टि गर्दा आफ्नै प्रतिरुपमा मानिसजातिकोसृष्टि गर्नुभयो।
2 परमेश्वरले मानिसलाई पुरूष र स्त्री दुई रुपमा सृष्टि गर्नुभयो। जब उहाँले तिनीहरुलाई सृष्टि गर्नुभयो तिनीहरुलाई आशिष दिनु भयो अनि तिनीहरुलाई मानिस भन्नुभयो।
21 जब हनोक पैसठी वर्ष पुगे उनको एउटा छोरो जन्मियो जसको नाउँ मतूशेलह राखियो।
22 मतूशेलह जन्मेपछि हनोक तीन सय वर्ष सम्म परमेश्वरको पछि-पछि हिंडिरहे। यस अवधिमा उसको अरु छोरा-छोरीहरु जन्मे।
23 यसर्थ हनोक तीन सय पैंसठ वर्ष सम्म बाँचे।
24 एक दिन हनोक परमेश्वरसित हिंडिरहेको समयमा हनोक हराए। परमेश्वरले उसलाई जिउँदै स्वर्ग लानु भयो।
1.2राजा2: 1-12
2 एलियाले एलीशालाई भने, कृपया यही पर्ख, किनभने परमप्रभुले मलाई बेतेल जानु भन्नु भएको छ। तर एलीशाले भने, परमप्रभु हुनुहुन्छ अनि तिमी जिउँदै छौ, यसर्थ म शपथ खाएर भन्छु, म तिमीलाई छोड्ने छैन। यसकारण दुइ जना मानिसहरू बेतेलतिर गए।
3 बेतेलमा अगमवक्ताहरूको दल एलीशाकहाँ आयो अनि उनलाई भन्यो, तिमीलाई थाह छ परमप्रभुले तिम्रा मालिकलाई आज लिएर जानु हुनेछ। एलीशाले भने, हो म जान्दछु यो। यस बारे कुरा नगर।
4 एलियाले एलीशालाई भने, कृपया यहीं पर्ख, किनभने परमप्रभुले मलाई यरीहोमा जानु भन्नुभएको छ। एलीशाले उत्तर दिए, म शपथ खाएर भन्छु किनभने परमप्रभु हुनुहुन्छ अनि तिमी जिउँदो छौ, म तिमीलाई छोड्ने छैन। यसकारण दुइ जना मानिसहरू यरीहोमा गए।
5 यरीहोको अगमवक्ताहरूको दल एलीया कहाँ आयो अनि उनिहरूले उसलाई भने, के तिमीलाई थाहा छ कि तिम्रो मालिकलाई आज परमप्रभुले तिमी देखी टाढा लिएर जानु हुँदैछ। एलीशाले भने, हो, म जान्दछु यो विषयमा कुरा नगर।
6 एलियाले एलीशासँग भने, कृपया यहीं पर्ख किनकि परमप्रभुले मलाई यर्दन तरेर जानु भन्नुभएको छ। एलीशाले भने, परमेश्वरको साक्षी दिएर म प्रतिज्ञा गर्छु, म तपाईंलाई छोड्ने छैन। अनि दुइ व्यक्ति गए।
9 जब तिनीहरूले नदी तरे एलियाले एलीशालाई भने, परमेश्वरले मलाई तिमीबाट लिएर जानु अघि तिम्रो लागि म के गर्न सक्छु? एलीशाले भने, म तपाईको उत्तराधिकारी हुन चाहन्छु।
10 एलियाले भने, तिमीले अप्ठ्यारो वस्तु माग्यौ। जब तिमीबाट मलाई लिएर जाँदा यदि तिमीले देख्यौ भने तब यस्तै हुन्छ। तर तिमीले देखेनौ भने त्यस्तो हुँदैन।
12 एलीशाले यसलाई देखे अनि चिच्याए, मेरा पिता! मेरा पिता! इस्राएलको रथ अनि उहाँका घोडसैनिकहरू। एलीशाले एलियालाई फेरि कहिले देखेनन्। एलीशाले आफ्नो लुगालाई पक्रिए अनि आफ्नो शोक देखाउन च्याते।
2. यूहन्ना 11 : 1,4(से 2nd ,), 11 (हाम्रो)-15, 17, 32-34, 38-44
4 जब येशुले त्यस्तो सुन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, यो बिमारले उसलाई मृत्यु गराउनेछैन। तर यो बिमारी परमेश्वरको महिमाका निम्ति हो। यस्तो घटना परमेश्वरको पुत्रको महिमा ल्याउनलाई भएको छ।
11 येशूले ती कुराहरू भनिसके पछि, उहाँले भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस सुतिरहेछन्। तर म त्यहाँ उसलाई उठाँउन जानेछु।
12 चेलाहरूले उत्तर दिए, हे प्रभु यदि ऊ सुन्छ भने, ऊ निको हुनेछ।
14 त्यसपछि येशूले स्पष्ट प्रकारले भन्नु भयो, लाजरस मरिसक्यो।
15 अनि म खुशी छु कि म त्यहाँ थिइनँ। म तिमीहरूको लागि खुशी छु किनभने तिमीहरूले ममा विश्वास राख्नेछौ अब हामी उनीकहाँ जाँऊ।
32 मरियम त्यस ठाउँमा गइन् जहाँ येशू हुनुहुथ्यो। जब उनले येशूलाई देखिन् उनले झुकेर चरणमा ढोगिन्। मरियमले भनिन्, हे प्रभु, यदि तपाईं त्यहाँ हुनु भएको भए, मेरा भाइ मर्ने थिएन।
34 येशूले सोध्नुभयो, तिमीले उसलाई कहाँ राखेकाछौ।”तिनीहरूले भने, प्रभु, आउनु होस् अनि हेर्नुहोस्।
39 येशूले भन्नुभयो, ढुंगा हटाऊ। मार्थाले भनिन्, तर प्रभु लाजरस मरेको चार दिन भइसक्यो तपाईंलाई नराम्रो गन्ध आउनेछ। मार्था लाजरसको बहिनी थी।
40 तब येशूले मार्थालाई भन्नुभयो, के मैले तिमीलाई भनेको थिइन? कि यदि तिमाले विश्वास गरयौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ?
41 तब तिनीहरूले प्रवेशद्वारको ढुंगा हटाई दिए। तब यशूले आफ्ना आँखा उठाउनु भयो र भन्नुभयो, पिता, तपाईंले मलाई सुन्नु भएकोमा म धन्यवाद प्रकट गर्छु।
42 म जान्दछु कि तपाईंले सँधैं मलाई सुन्नुहुन्छ। तर मैले यो कुराहरू भनें किनभने मानिसहरू मेरो वरिपरि छन्। म तिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कि तपाईंले मलाईं पठाउने भएको हो।
43 येशूले यति भनिसकेपछि उहाँले जोड आवाजमा डाक्नुभयो, लाजरस निस्क, बाहिर आऊ!
44 मृत मान्छे बाहिर निस्क्यो। उसका हात र खुट्टाहरू मलमलका लुगाका टुक्राहरूले बेह्रिएका थिए। उसको अनुहार रूमालले ढाकिएको थियो।येशूले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, उसको लुगाहरू कात्रो खोलिदेउ र उसलाई जान देऊ।
3. यूहन्ना3: 16
4. यूहन्ना 17 : 1-3
5.2कोरिन्थी9: 15
15 उनको वयान गर्न नसक्ने दानको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ।
नश्वर विश्वास (जीवनको भौतिक ज्ञान) र अमर सत्य (आध्यात्मिक अर्थ) टेरेस र गहुँ हुन्, जुन प्रगतिबाट एकजुट हुँदैनन्, तर विभाजित हुन्छन्।
मोर्टल्सको आध्यात्मिक मानिस र उसको विचारको असीमित दायराको एकदमै अपूर्ण भावना हुन्छ। उहाँसँग अनन्त जीवन छ। कहिल्यै जन्मिएन र कहिल्यै मर्दैनन्, अनन्त विज्ञानमा परमेश्वरको सरकारको अधीनमा रहेको मानिसका लागि आफ्नो उच्च सम्पत्तीबाट खस्नु असम्भव थियो।
आध्यात्मिक ज्ञानको माध्यमबाट, तपाईं ईश्वरीय को हृदय बुझ्न सक्नुहुन्छ, र यसरी विज्ञान मा सामान्य शब्द मानिस बुझ्न को लागी शुरू गर्न सक्नुहुन्छ। मानिस देवतामा लीन हुँदैन, र मानिसले आफ्नो व्यक्तित्व गुमाउन सक्दैन, किनकि उसले अनन्त जीवन प्रतिबिम्बित गर्दछ; न त उनी एकान्त, एक्लो विचार हो किनकि उसले असीम दिमागलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, समस्त पदार्थको योग।
असीमको सुरुवात कहिले भएको थिएन र अन्त कहिल्यै हुँदैन। मन र यसका संरचनाहरू कहिले नामेट हुन सक्दैन। मानिस पेंडुलम होईन, दुष्ट र राम्रो, आनन्द र शोक, बिमारी र स्वास्थ्य, जीवन र मृत्युको बीचमा स्विंग। जीवन र यसका प्राध्यापकहरू क्यालेन्डरले मापन गर्दैनन्। उत्तम र अमर तिनीहरूको निर्माताको अनन्त समानता हुन्। कुनै पनि हालतमा कुनै भौतिक जीवाणु असिद्धबाट उठ्दैन र आफ्नो मूल माथि आत्मामा पुग्न प्रयास गर्दैछ। स्ट्रिम यसको स्रोत भन्दा माथि उठ्दैन।
सौर बर्षले जीवनको मापनले युवावस्था लुट्छ र उमेरलाई कुरूपता दिन्छ। सद्गुण र सत्यको उज्ज्वल सूर्य अस्तित्वमा रहेको छ। म्यानहुड यसको अनन्त दिउँसो हो, खस्कँदै गरेको घामले अविनाशी। भौतिक र भौतिक रूपमा, सौन्दर्यको क्षणिक भावनाहरु हराउँछन्, आत्माको चमक उज्यालो र अविनाशी महिमाहरु संग अर्थ मा बिहान हुनु पर्छ।
उमेर कहिले पनि रेकर्ड नगर्नुहोस्। कालक्रम डेटा सधैंको लागि विशालको हिस्सा हुँदैन। जन्म र मृत्युको समय सारणीहरू पुरुषत्व र पुरुषत्वको बिरूद्ध धेरै षडयन्त्रहरू हुन्। सबै कुरा राम्रो र सुन्दर छ कि नाप्ने र सीमित गर्ने त्रुटि बाहेक, मानिसले वर्ष र दश भन्दा बढी रमाइलो गर्नेछ र अझै पनि आफ्नो जोस, ताजगी, र प्रतिज्ञा कायम राख्दछ। मानिस, अमर मन द्वारा शासित, सधैं सुन्दर र भव्य हुन्छ। प्रत्येक सफल वर्ष ज्ञान, सौन्दर्य, र पवित्रता प्रकट गर्दछ।
डर कहिल्यै हुनबाट रोकियो र यसको कार्य हो। रगत, मुटु, फोक्सो, दिमाग आदि। जीवन, भगवान संग केहि गर्न को लागी गरीएको छैन। वास्तविक व्यक्तिको हरेक कार्य दिव्य मन द्वारा संचालित हुन्छ।
जब हामी जान्छौं कि जीवन आत्मा हो, कहिले पनि वा त्यसमा कुनै फरक छैन, यो बुझाइ आत्मनिर्भरतामा विस्तार हुनेछ, परमेश्वरमा सबै पाउन, राम्रो, र कुनै अन्य चेतनाको आवश्यकता पर्दैन।
येशूले लाजरसको बारेमा भन्नुभयो: "हाम्रो साथी लाजरस सुतिरहेछ; तर म उसलाई निद्राबाट ब्यूँताउन जान्छु।" येशूले लाजरसको मृत्यु कहिल्यै भएको थिएन भन्ने कुरा बुझेर लाजरसलाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो, उहाँको शरीर मर्‍यो र फेरि जीवित भयो भनेर स्वीकारेर होइन।
येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना 8: 51), "यदि कुनै मानिसले मेरो वचन पालन गर्छ भने, त्यो मानिस कहिल्यै मर्ने छैन।" त्यो भनाइ आध्यात्मिक जीवनमा सीमित छैन, तर अस्तित्वको सबै घटनाहरू समावेश गर्दछ। मरेकाहरूलाई निको पार्दै र मरेकाहरूलाई बिउँताउँदै येशूले यो कुरा देखाउनुभयो। नश्वर दिमागमा गल्तीले छुट्टिनुपर्दछ, आफैंलाई यसको कर्महरूसँगै छोड्नु पर्छ, र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदर्श हुनुहुन्छ, देखा पर्नेछ। विश्वासले यसको सिमाना विस्तार गर्नुपर्दछ र यसको आधारलाई महत्वको आधारमा आत्मामा भर पर्नु पर्दछ। जब मानिस मृत्युमा उसको विश्वास छोड्छ, तब ऊ परमेश्वर, जीवन र प्रेमतर्फ अझ छिटो अघि बढ्छ। रोग र मृत्युमा विश्वास, पापमा विश्वासको रूपमा, जीवन र स्वास्थ्यको सही अर्थमा बन्द हुन्छ। विज्ञानमा मानिसहरु कहिले यो महान तथ्य को लागी जानेछ?
10. 302 : 15 (सामञ्जस्यपूर्ण)-18
… सामंजस्यपूर्ण र अमर मानिस सदाको लागि रहन्छ, र कुनै पनि जीवन, पदार्थ, र बौद्धिक पदार्थको अस्तित्वको रूपमा नश्वर भ्रम भन्दा पछाडि र माथि हुन्छ।
यदि मृत्युमाथिको विश्वासलाई खारेज गरियो, र यो बुझाइले मृत्यु भयो भने, यो "जीवनको रूख" हुनेछ, जसको फलहरू द्वारा चिनिन्छ। मानिसले आफ्नो शक्ति र प्रयासको नवीनीकरण गर्नुपर्दछ, र कपटको मूर्खतालाई पनि हेर्नुपर्दछ, जबकि आफ्नै मुक्ति कार्यको आवश्यकतालाई पनि सिक्नुपर्दछ। जब यो जानिन्छ कि रोगले जीवनलाई नष्ट गर्न सक्दैन, र यो मृत्युले पाप वा बिमारीबाट मुक्ति पाउँदैन, यो समझ जीवनको नयाँपनमा द्रुत हुन्छ। यो या त मर्न को इच्छा वा चिहान को एक डर मास्टर गर्नेछ, र यसैले भयानक अस्तित्व कि ठूलो डर नष्ट।
मृत्युमा सबै विश्वासको त्याग र यसको डंकको डरले स्वास्थ्य र नैतिकताको स्तरलाई अहिलेको उचाइभन्दा धेरै माथि उठाउनेछ र हामीलाई ईश्वरीय जीवनको बगैंचामा परमेश्वरमा अतुलनीय विश्वास राख्न सक्नेछ। पापले मृत्यु ल्यायो, र पापको हराएको साथ मृत्यु समाप्त हुनेछ। मानिस अमर हो, र शरीर मर्दैन, किनकि चीजलाई समर्पण गर्न जीवन हुँदैन। मानव अवधारणा, पदार्थ, मृत्यु, रोग, बिमारी, र पाप नामक सबै हुन् कि नष्ट गर्न सकिन्छ।
लेखकले आशाविहीन जैविक रोगलाई निको पारेका छन्, र मर्नुलाई जीवन र स्वास्थ्यको लागि उठाइएका छन् जसलाई भगवानले एक मात्र जीवनको रूपमा बुझेका छन्। यो विश्वास गर्नु पाप हो कि कुनै पनि कुराले सर्वशक्तिमान र अनन्त जीवनलाई वशमा राख्न सक्छ र यो जीवन मृत्युदण्डको साथसाथै आत्माको अन्य अंगहरु द्वारा बुझ्नुपर्दछ।
हामी आत्माको ईश्वरीय शक्ति महसुस गरौं, हामीलाई जीवनको नयाँपनमा ल्याउँछौं र कुनै मृत्यु वा भौतिक शक्तिलाई नष्ट गर्न सक्षमको रूपमा पहिचान गर्दैनौं। हामी आनन्दित हुन्छौं कि हामी ईश्वरीय "शक्तिहरू" का अधीनमा छौं। यस्तो हुनुको वास्तविक विज्ञान हो।